आजको राशिफल : बि.स.२०७४ पौष २४ गते । शुक्रबार । ईश्वी सन् २०१८ जनवरी ०८ तारिख । - Enepali Online
बि.स. २०७४ साल पौष २४ गते सोमबार इश्वी सन २०१८ जनवरी ८ तारीख माघकृष्ण पक्ष सप्तमी तिथी चन्द्रमा कन्या राशिमा सुर्य दक्षीणायन हेमन्त ऋतु ।
स्वास्थ सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्नेछ । अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । सामाजिक कार्यमा अब्बल स्थान प्राप्त रहनेछ । नजिकका ब्यत्तिहरुबाट धोका हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । सामान्य कार्यमा अधिक श्रम खर्चनु पर्ने सम्भाबना रहेकोछ ।
कला कौशल तथा साहित्य संगीत तर्फ समय ब्यतित रहला । आफुभन्दा सानाको सहयोगमा कार्यसम्पादनमा सहजता रहनेछ । अध्यन अध्यापनका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । आम्दानिका बिभीन्न श्रोतहरु फेलापर्ने योग रहेकोछ ।
भौतिक श्रोत साधनको परीचालनमा समय ब्यतित रहला । पारिवारिक स्वास्थमा सामान्य समस्या आउन सक्नेछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा रोकिएर रहेका जटिल कार्यहरु सम्पादित हुनेछन । प्रेम सम्बन्धमा सामान्य समस्या आउन सक्नेछ ।
यात्राका क्षेत्रमा सजग रहनुहोला । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । आटँ शाहसमा कमि भएको महसुस रहनेछ । नजिकका मित्रजनहरुबाटँ धोका हुन सक्नेछ । आम्दानि क्षेत्र सबल रहेको छ ।
स्वास्थ सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्नेछ । आम्दानिका तुलनामा खर्च बढ्न सक्नेछ । नजिकका ईष्टमित्रहरु सगँ साधारण मनमुटाब रहन सक्नेछ । प्रतिपक्षीहरु सबल रहनाले कार्य सम्पादनमा साधारण समस्या आईपर्न सक्नेछ ।
आर्थीक समस्याबाट बच्न सकरात्मक सोचको आबश्यक पर्न सक्ला । परीस्थीति सगँ जुध्ने क्षमतामा बृद्धि हुनाले कार्य सफल रहनेछ । परिवारको सहयोगले बौधिक तथा आर्थीक बिकासको बाटो फेला पर्ने छ । यात्रामा सजग रहनु होला ।
अगाडि सारेका व्यक्तीद्वारा सम्पादित कार्यहरु बिफल हुनाले अपजस खेप्नुपर्ला । मित्रजनसँगको अधिक निकटताको कारण भाग्योदयमा बाधा तथा अनावश्यक खर्च उत्पन्न हुनेछ । पारीवारलाई दिएको समय फाईदा जनक रहला ।
मान्यजनको स्वास्थमा देखिएको खराबिले मानसिक तनाब उत्पन्न गराउला । मित्रजनको यथेष्ट सहयोग द्वारा आम्दानिका नँया स्रोत फेला पर्नेछन । आफ्नै लापरबाहिले धनमालको क्षति ब्यर्होनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ ।
अगाडि सारेका व्यक्तीद्वारा सम्पादित कार्यहरु बिफल हुनेछन । अर्काको खुसिको लागी अनावश्यक समय र धन ब्यय गर्नु पर्नेछ । अनावश्यक यात्रा ले दिन झन्झट पुर्ण ब्यतित हुनेछ । मित्रजनहरुको सहयोग यथेष्ट प्राप्त रहनेछ ।
स्वास्थ क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु पर्नेछ । हतासमा गरिएको निर्णयको कारण दाम्पत्य जिवनमा खटपट उत्पन्न हुन सक्नेछ । प्राकृतीक स्रोत साधनको परिचालनबाट यथेष्ट लाभ उठाउन कुटुम्बको सहयोग आवश्यक रहनेछ ।
दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खटपट रहन सक्नेछ । स्थान्तरणको योग रहेको छ । ईष्ट मित्रहरु सगँ सामान्य बादबीवाद रहन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । भौतिक साधनको प्रयोमा बिषेश ध्यान दिनुहोला । ब्यापार ब्यवसाय मध्यम रहनेछ ।
नेपाल ज्योतिष परिषद् स्थापना दिवस – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
Previous Post Previous post: सिधा कुरा जनतासँग: रविले गरे- इटहरीमा २० लाख भ्रस्टाचार भएको खुलासा, मेयर विदेश भ्रमणमा (भिडियो सहित)
Next Post Next post: माओवादी केन्द्रमा फर्किने तयारीमा बाबुराम भट्टराई, ल्वाङ होमस्टेमा भट्टराईकाे थप खुलासा